musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Kukuru COVID-19 kubuda pangarava yeNorwegian Cruise Line yakavharirwa zvizere
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Health News • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Denda iri rakaitika kunyangwe paine mitemo yeNorway, inoda kuti vafambi nevashandi vese vange vabayiwa hutachiona mavhiki maviri isati yasvika.
A Norwegian Cruise Line chikepe chine vapfuuri vanopfuura zviuru zvitatu kuenda kuNew Orleans chataura nezve COVID-3,000 kubuda muchikepe.
Kunyangwe paine chinodikanwa chekuti vese vafambi nevashandi vengarava vaifanira kubaiwa nhomba vasati vakwira, vanhu gumi vakaongororwa kuti vane COVID-10 vari muchikepe. Norwegian Breakaway cruise liner.
The Norwegian Breakaway akanga abva kuNew Orleans musi waMbudzi 28 uye aifanira kudzoka ikoko kupera kwevhiki. Munzira yayo, ngarava yakafona akati wandei muBelize, Honduras, neMexico, sekureva kweLouisiana Department of Health.
Vafambi nevashandi vanopfuura zviuru zvitatu nemazana maviri vanofungidzirwa kunge vari muchikepe Norwegian Breakaway. Vakuru vakati mukutaura kuti rwendo rwekufamba nechikepe "ranga richiomerera kune kwakakodzera kuvharirwa uye kuzviparadzanisa nevamwe sezvo nyaya nyowani uye kufumurwa zvaonekwa."
Pakusvika muNew Orleans, mutyairi wega wega uye nhengo yevashandi vanoedzwa. Chero ani anouya neCCIDID-19 anofanira kubva angoenda kunogara ari oga, kungave kumba kana pekugara pakapihwa nerwendo rwekufamba.
Kuputika kwakaitika kunyangwe Norwegian Cruise LineMitemo, inoda kuti vese vafambi nenhengo dzechikwata vange vachibaiwa hutachiona mavhiki maviri isati yasvika.
Ngarava dzengarava dzakawana mukurumbira gore rapfuura, apo coronavirus yakatanga kupararira pasirese uye vafambi vaigara vachinyimwa kodzero yekuburuka. Vachimanikidzwa kugara vega muchikepe, vamwe vakapedzisira vafira mugungwa, vamwe vakazomhanyiswa kuchipatara sezvo mamiriro avo akange adzikira. Izvi zvakakurudzira vakuru veUS kumisa rwendo rwese kwemwedzi yakati wandei.
Zvita 8, 2021 pa06: 18
Uye isu takanga tisina kukwanisa kumirira VACCINE kuti TIPUNISE! CHOKWADI!?!
Zvita 7, 2021 pa16: 28
Wow, vanhu gumi nevapfumbamwe kubva pa19 vari .3200%. Ini ndinofungidzira chero chinhu kuti muverengi atarise "Makuru Kubuda." Ngatibatsirei kuunza kudzikama kuvanhu uye kwete kuwedzera kusagadzikana kwepfungwa kuri kuramba kuchibuda mudenda iri.
Buster Hyman anoti:
Zvita 6, 2021 pa18: 09
Hongu, zvakada kufanana nekuyedza, kushandura gene- clot shot ndiyo mhedzisiro yeCHIRONGWA CHEGLOBAL CHEKUURAYA VANHU.
Zvita 6, 2021 pa07: 28
Ahh, manyepo eCOVID anoenderera mberi. Alan Fine zviri pachena pano kusundira rondedzero. Hutachiona hausi honzeri yehurwere, imi varombo vechiJudha.